– Dhaabbata Qorannoo Gadaa | Haramaya University
Caasaa Bulchiinsaafi Hooggansaa
Dhaabbanni Qorannoo Gadaa Yuunivarsiitii Haramaayaa, dhaabbata barnootaa kallattii Sirna Gadaa hunda irratti qorannoo,
barnootaafi tajaajiloota hawaasaa sadarkaa qulqullinni isaa ol’aanaa ta’e qabu guddisuuf hojjatuudha.
Mul’ata, Ergamaafi Sonoota Dhaabbata Qorannoo Gadaa
Mul’atni Dhaabbata Qorannoo Gadaa, dhaabbata Sirna Gadaa irratti qorannoofi barnoota sadarkaa biyyoolessaa,
sadarkaa ardiifi addunyaa irratti fudhatamummaa qabu ta’uudha.
Ergamni Dhaabbata Qorannoo Gadaa tattaaffiiwwan qooda fudhattootni hundi Sirna Gadaa irratti gama qorannoo,
barnootaafi tajaajiloota hawaasaa dhuunfaafi gamtaatiin taasisaniif haala mijeessuu, gargaaruufi sissi’eessuudha.
2. Dhaabbatni Qorannoo Gadaa sonoota ijoo armaan gadiitiif kan dhaabbateedha:
Akeeka/kaayyoo Bu’ureeffatuu isaa: ergama dhaabbatichaafi kaayyoowwan isaa kan yeroo dheeraa galmaan gahuuf murannoo ol’aanaafi dhaabbataa ta’e/kan hin jijjiiramne qaba.
Ilaalcha Beekumsa-bu’ureeffateefi Aadaa Fooyyessuu: murannoo ol’aanoo ta’e kan karaa beekumsaafi hubannoo cimaa ijaaruutiin yaadaafi ilaalcha namoota dhuunfaa akkasumas gareewwaniifi dhaabbilee jijjiiraniin;
Bilisummaa Barnootaa: mirga bilisa ta’anii waa ibsatuufi yaadota wal jijjiiruu jajjabeessuu, dirqamoota mirgoota kanneeniin wal qabatan xiyyeeffannoo keessa galchuu;
Gamtoominaafi Michooma: Collaboration and partnership: aadaa walgargaarsaa, qindeessummaa, barnootaa, qorannoofi sagantaaleen bakka hunda gahuu danda’u amanamummaan ijaaruu keessatti
Haqa: galuumsota hunda keessatti kabajaa, walqixxummaa, al-loogummaa
hunda-hammattummaa, safuufi mirgoota jajjabeessuu;
Itti gaafatamummaa: adeemsotaa murti kenniinsaafi gochoota dhaabbatichaatiif itti gaafatamummaa fudhachuu, waliifi ummataaf itti gaafatamummaa fudhachuu;
Kaayyo-Qabeessummaafi Amanamummaa: bu’aa amanamaa ta’e, kan kaayyoo irratti hundaa’e, kan guutuu ta’eefi ragaa irratti hundaa’e dhiheessuuf yaaluufi; sirrummaa amanamummaa, dhugummaafi sadarkaalee cimsuudhaaf/itti fufsiisuudhaaf yaaluu.
Aangessuu: gareewwanii seera qabeessa ta’aniifi kaka’uumsota ol’aanoo namoota dhuunfaa, adeemsota guddina beekumsaa keessatti isaan hirmaachisuuniifi yaada sammuu isaanii, ilaalchaafi dandeettiiwwan isaanii kabajuudhaan isaan guddisuu;
Bulchiinsa Gaarii: milkaa’ina itti fufiinsa qabuufi hojjatamuu danda’u bira gahuudhaaf iftoominaan ummata, qabeenyotaafi carraalee too’achuufi bulchuu.
Garaagarummaa: garaagarummaa afaanotaa, aadaalee, ilaalchotaafi yaadotaa kabajuu.